Arrin yaab leh: Diyaarad kusii jeeday UK oo lagu qalqal galiyay sheekada Rakaabkii la socday | Entertainment and News Site
Home » bulshada » News » Arrin yaab leh: Diyaarad kusii jeeday UK oo lagu qalqal galiyay sheekada Rakaabkii la socday
Arrin yaab leh: Diyaarad kusii jeeday UK oo lagu qalqal galiyay sheekada Rakaabkii la socday
daajis.com:- Mid kamid ah duuliyayaasha shirkada Easyjet ayaa si argagax leh u dajiyay diyaarad uu kasoo duuliyay dalka Slovenia kuna socotay UK.
Diyaaradaani ayaa waxaa saarnaa rakaab tirro ahaan lagu sheegay 151 rakaab kuwaa oo galay jawi kaduwan kii hore kadib markii gudaha diyaarada lagu arkay dhalinyaro ku sheekeysanaayay Daacish iyo Al-qacida.
Rakaabka diyaarada ayaa durba wargaliyay howlwadeenada diyaarada, iyagoo u sheegay in diyaarada ay la socdaan 3 Ruux oo si aad ah uga sheekeysanaaya Kooxaha argagixisada.
Diyaarada oo kusii jeeday UK ayaa laga dajiyay garoonka Cologne-Bonn ee dalka Jarmalka, waxaana xabsi la dhigay 3dii dhalinyaro ee laga shakisnaa.
Booliska ayaa burburiyay Boorso weyn oo ay wateen dhalinyaradaasi kadib markii laga shakiyay isku xirnaanshahooda iyo sheekooyinkooda ku aadanaa howlaha argagixisada.
Booliska Cologne ayaa sheegay in qaar ka mid ah rakaabka ay shaqaalaha diyaarada ku wargeliyaan in saddexda nin ay ka sheekaysanayeen argagixisanimo, balse faahfaahin dheeraad ah laguma sheegin qoraalka.
Dhinaca kale, Maamulka Shirkadda Easyjet ayaa sheegay in duuliyaha uu gaaray go’aanka dejinta diyaaradda, si uu u hubiyo ammaanka rakaabka diyaaradda saaran.